Namathumba labia - akuyona kuphela ezingemnandi, kodwa futhi inkinga eyingozi. Pathology ngokuvamile uhambisana ubuhlungu kanye ukulunywa ezinzima. Kulesi sihloko uzofunda ukuthi benzeni ukubukeka amathumba futhi kungani zivela.
A furuncle kuyinto ukuvuvukala follicle izinwele kanye indlala. Kungenzeka kunoma iyiphi ingxenye yomzimba, hhayi ngaphandle imbilapho. On the labia amathumba zenzeka kakhulu phezu kwesisekelo sabo. I zokugula kuhambisana ububomvu kwesikhumba emhlabeni site ukutheleleka kanye ukulunywa ezinzima. Umuntu ngokuvamile imfiva, ngezinye izikhathi ubovu osenyameni siyenzeka. Isetshenziselwa ukwelapha antibiotic izibulali-magciwane. Kwezinye izimo, kudingeka ukuhlinzwa.
Kungani ngiba thumba?
Izimbangela ukuvuvukala suppurative ecasha Ukungena emzimbeni kwamagciwane. Ngokuvamile staphylococci. Igciwane kubangela ukuvuvukala follicle izinwele kanye nezicubu eziseduze.
Ukwenza kusebenze staph emzimbeni kungabangela ukunqwabelana ezahlukahlukene. Ziyini izimbangela ezinkulu zezifo?
amasosha omzimba Kwehliswe. Lapho umzimba ozivikela kuthiwa buthaka, umzimba awukwazi ukumelana ngokugcwele kuhlasela kwamagciwane.
Ukwehluleka ukuhambisana aphansi imithetho inhlanzeko yomuntu siqu.
ukujuluka Eliphakeme. A imvelo olumanzi iyindawo ephelele nokuphila kwamagciwane.
iziyaluyalu umzimba. Umzimba linendima ebalulekile emsebenzini wonke umzimba.
Ukuvuvukala Bartholin indlala.
Namathumba labia ngokuvamile kwenzeka ezindaweni nokusikwa ukushefa. Ngemva ochwepheshe izinwele ukususwa iphakamise ukwelapha endaweni ethintekile nge magciwane.
Ukubonakaliswa basemtholampilo isifo
Ukuba khona ithumba endaweni obuseduze - lesi simanga edabukisayo. Njengoba lokhu zokugula kuzibonakalisa? It has izigaba eziningana ukuthuthukiswa.
Ekuqaleni, kukhona ukuvuvukala elincane endaweni zangasese, abanye uqaphele okuvela ukulunywa. Khona-ke ngamathumba uqala ukushwaqa, kukhona ukuvuvukala nokuvuvukala e lapho ukuzamazama kwaqala khona wazizwa okusizwa ukushaya. I ububanzi we induna ziyahlukahluka kusuka 1 kuya 3 cm.
Ngemva kwesikhathi esithile, wesayithi ethintekile uthuthuva ubovu core, bonke ubuso ligcwele Bubbles. Namathumba labia ngezinye izikhathi zihambisana imfiva, ubuhlungu bemisipha kanye bekhanda. Ngaphezu kwalokho, abanye abesifazane baye zingavuvukalanga lymph node, okhombisa izinkinga ezingathi sína emzimbeni. Yingakho akunakwenzeka uyephuza ukwelashwa lapho izimpawu zokuqala ukuvuvukala.
Isigaba sesithathu is final. Kulesi sigaba, nokuvuthwa futhi okwalandela asike izidumbu zabantu furuncle, izicubu kwalo zikhishwa kusukela ubomvu zanqwabelana.
Khona-ke kuqala inkathi ukululama. Ngalesi sikhathi kubalulekile ikakhulukazi ukuqapha inhlanzeko endaweni obuseduze, njengoba lokhu inquma ubude ukuphulukiswa ngamathumba. Ngokuvamile, le nkathi sihlala izinsuku ezingu 8-12.
Okufanele ukwenze nge ukubukeka amathumba?
Izilonda ku indawo obuseduze akufanele zishiywe. Lahla ukuqaleka ungasebenzisa utshwala salicylic.
ngempumelelo kakhulu kuba yibo bonke abantu Vishnevsky wamafutha, kodwa ngenxa iphunga eyinqaba, isetshenziswa kakhulu kuyaqabukela. Folk abelaphi ukuncoma ukwelapha namathumba anyanisi izindebe zangasese kubhakwa. Leli thuluzi ngokushesha udonsa ubomvu kusuka induna, ngakho yokutakula kwenzeka ezinsukwini ezimbalwa.
Kodwa indlela engcono kakhulu yokubhekana nale nkinga - ukucela usizo kudokotela onguchwepheshe. Yini odokotela bavame ukweluleka? Kuye isithombe zokwelapha, zokwelapha kungase kube into kokubili zokwelapha kanye kuhlinzwa.
Ukwelashwa zokugula evamile incike izimpawu kanye nezinkinga ezihambisana furuncle, kubangela i ukuvuvukala. abesifazane abaningi bakuthola sekwephuzile lokhu ngakho ukufuna usizo lukadokotela, bazama ukubhekana ithumba ngokwakho. Kulokhu ngokuvamile kudinga ukuhlinzwa eside.
Njengoba zokwelapha olandelanayo usebenzisa "Levomekol", "Ichthyol". Lezi yokugcoba asetshenziselwa ukunciphisa ukuvuvukala nokuvuvukala. Ngokusekelwe imiphumela yokuhlaziya ukuhlonza lwegciwane, udokotela ekunika imithi elwa namagciwane ( "Dicloxacillin", "tetracycline", "Erythromycin"). Inkambo yokwelashwa akuyona amasonto angaphezu kwamabili.
Lapho udinga ukuhlinzwa?
Ezimweni sina ngokukhethekile, lapho ngamathumba a ubulili lip omkhulu defies yokwelapha yezokwelapha, udokotela sinquma ukusebenza. Ukuhlinzwa wenziwa usebenzisa ongakhetha izinzwa wendawo, ngakho ubuhlungu ukungakhululeki omncane. Phakathi ukuhlinzwa, udokotela lembula focus ukuvuvukala bese ususa elikuqukethe. I ingaphakathi okuholela is disinfected futhi ukusungula tube ekhethekile. Kuyadingeka ukuba asuse ubomvu. Amanzi isusiwe ngemuva kokuthi mayelana 5 izinsuku.
Ukuhlinzwa ikuvumela ukuba ngokushesha ukuqeda into ezifana ngamathumba phezu labia. Ukwelapha zizosebenza okuningi uma, ngaphezu zisebenzisa Physiotherapy (electrophoresis, UHF).
Yini engenziwa nge furuncle?
Kungakhathaliseki isigaba sayo yonke le nqubo sokugembula, isikhathi yokwelapha, ukuphila ubulili akuvunyelwe. Uma kungenjalo, wandise nengozi yokuba Ukuphinda.
Njengoba lokhu imfundo kuyinto focus ezithathelwanayo, thinta endaweni ethintekile kuphela ngezandla ezihlanzekile. Ngemva ukucutshungulwa izinqubo kumele bageze tandla nge ejenti elwa namagciwane ukuvimbela ingress ukutheleleka emzimbeni.
Ngokuzimela ukuqhuba thumba kwesidumbu (ukukhetha noma khama) akuvunyelwe nhlobo. Isikhumba endaweni imbilapho kuyinto ibuthaka, esiqhutshwa izitsha lapha eziningi capillary. Uma ngawakhamela ithumba akuyona ngokuphelele, ukutheleleka kungaba lingene egazini. Lokhu kuphumela yisishiso izicubu emthanjeni.
Wena ubuye abakwazi zizifunele noma bhala endaweni ethintekile. Uma ithumba kwatholakala uqobo, kudingeka aphathe ngokucophelela isilonda, asuse okuqukethwe isicelo ngebhandeshi. inqubo Antiseptic kufanele liphindwe kuze ukuphulukiswa ephelele induna. Ukuze wehlise ukuvuvukala kungathatha antibiotic. Imithi kufanele udokotela emva ukuhlolwa flora pathogenic.
Ukuze ugweme izinkinga ezifana, like ngamathumba phezu izindebe labia, kumelwe banamathela imithetho ethile zokuvimbela.
Okokuqala, odokotela belulekwa ukuba akhethe ngokucophelela izingubo zangaphansi. Kungcono ukugqoka izingubo ezenziwe izindwangu zemvelo ezivumela isikhumba ukuphefumula. izihlambi Daily okufanele zithathwe. Izinwele ukususwa ezindaweni obuseduze lufanele lwenteke kulamazinga lalandzelako ngokuqapha. Ukusikeka kanye microtrauma angase avuse ukuthuthukiswa ukuvuvukala.
Wonke umuntu wesifazane kufanele banakekele amasosha omzimba. umzimba buthaka ayikwazi ukumelana ngokugcwele Amagciwane abangela izifo. Ukudla kufanele libe ukudla okunothe ngamavithamini kanye izakhi mkhondo. Ngokwe udokotela, kungenzeka ukuchitha ukuyiphuza inkambo multivitamins namanxusa immunostimulatory.
Ukubukeka njalo amathumba ubufakazi nezinkinga zempilo ezingathí sina. Ngakho-ke, odokotela batusa hhayi nje aphathe zokugula, udlule ukuhlolisisa oluphelele ukuhlonza izimbangela sokuthuthuka. Hlala uphilile!